Juan Herranz. Manoratra, mamerina, manoratra
Eto aho no misarika fihetsika amin'ny filentehan'ny masoandro. Taona vitsivitsy lasa izay taorian'io fotoana io fa tsy tena te-hanova ny sary aho, marina. Loza manjo ny fandehan'ny fotoana sy ny mpanararaotra hafa ...
Ny tiana holazaina dia hoe rehefa maminavina avy hatrany ianao rehefa mandalo an'ity bilaogy ity dia manoratra tsikera sy fitsikerana ny ankamaroan'ny tantara, nefa tsy misy fanavakavahana mazava. Ny zavatra tsy novakiako, dia nandalo tanan'ny namana mamaky tsara na olona iray ao amin'ny fianakaviana. Ary dia miaraka mamorona an'ity habaka ity izahay ho an'ireo phobias literatiora sy phobias amin'ny halehibe voalohany.
Mazava ho azy, manararaotra ny zava-misy fa ny Pisuerga dia mamakivaky an'i Valladolid, miresaka momba ny bokiko ihany koa aho, izay atokako ho kely sisa ny fotoana sisa tavela. Satria tsaroako, ary tsy fantatro ny fomba hampiasana tsara ireo rano mitete ireo amin'ny zavatra "mahasoa" kokoa, dia manao forez manokana ho mpanoratra mpanoratra ary indraindray koa manoratra boky fikarohana.
Ary izany, na inona na inona tianao holazaina amiko dia azonao lazaina amiko eto:
Iza ny anaranao? *
Manoratra amin'ny ... *
Ho an'ny ambiny, raha mikiry mamaky ianao dia hanararaotra hampahafantatra bebe kokoa ny tenako:
Teraka tao Zaragoza aho tamin'ny 14 Jona 1975, tamin'io fotoana io ihany ny baolina marihin'i Real Zaragoza tamin'i Barça tamin'ny ampahefa-dalana an'ny Copa del Rey. Avy tany amin'ny hopitaly, akaikin'i Romareda, nankalaza ny tanjona sy ny nahaterahako ny raiko. Famantarana tsara amin'ny maha-mpilalao baolina kitra izay tapaka fohy noho ny fahaizako tsy nahomby tamin'ny baolina teo anelanelan'ny tongotro. Angamba izany no antony, taorian'ny nahazoako ny mari-pahaizana momba ny diplaoman'ny oniversite, dia nifantoka tamin'ny fialamboly hafa aho, nanoratra, nanitatra fironana taloha hamorona.
Hatramin'ny namoahako ny tantarako voalohany, tamin'ny 2001, Nahita tantara vaovao holazaina aho sy ny fotoana ilaina hipetrahana hanoratako azy ireo. Tsy misy terena, mitsangana tampoka izy ireo na misy mandefa azy ireo amiko ary miafara amin'ny fandresen-dahatra ahy. Ny fizotrany dia ateraka amin'ny fomba tsy ampoizina, ho voajanahary isan'andro isan'andro eo anelanelan'ny sary an-tsaina sy ny taratasy.
Noho izany, mankafy ny asan'ny mpanoratra amin'ny fombako aho. Rehefa mijery aho dia mahita, eo anelanelan'ny fahagagana sy ny fahafaham-po, boky roa ambin'ny folo navoaka tao aoriako: “Ny fahatsiarovana ny amboadia","Fotoana faharoa","Vaovao Cassandra","manova","Manomboka amin'ny baolina kitra ka hatrany amin'ny soccer","Ireo mpiady Ejea","Miandry ny anjely", «El sueño del santo»,« Real Zaragoza 2.0 »« Angano very »«Esas estrellas que llueven"Ary" Ny sandrin'ny hazofijaliako". Fanentanana hitazomana ny fanoratana raha mipoitra hevitra vaovao.
Novel "Ny fahatsiarovana ny amboadia" Editorial Egido, 2001
Novel "Vintana faharoa" Mira editera, 2004
Volume: "Cassandra News" Editorial Espiral, Bilbao, Jona 2006
Fiaraha-miasa amin'ny boky "Ny momba anay ary mbola hitohy" Ejea 2002
Mpandray anjara amin'ny boky: "Saturnian Creatures" Aragonese Writers Association 2007
Birao Fanonta ao amin'ny Magazine Regional Literary "Ágora"
Fandraisana anjara amin'ny gazety literatiora "Criaturas Saturnianas" amin'ny isa 6 tamin'ny 2008
Tonian-dahatsoratry ny boky fahatsiarovana an'ny SD Ejea. Jona 2008
Boky: "Ireo mpiady an'i Ejea". Jona 2009
Novel: "Alter" Editorial Andrómeda - fanangonana Fantastic World. Martsa 2010
Novel: "Miandry ny anjely" - Brosquils Editions. Jan 2011
Mpiara-miombon'antoka amin'ny dossier fampirantiana sary an'i María Luna: «Esencial y Cotidiano»
-Novel: «El sueño del santo»- Jereo ny mpamoaka lahatsoratra. 2013
-Novel: «Esas estrellas que llueven»- Jereo ny mpamoaka lahatsoratra. 2016 (fizarana faharoa amin'ny «El sueño del santo»)
-Novel: «Ny sandry hazo fijaliana» - Amazon. 2016
FANomezana sy haja:
Fankalazana ny tantaram-pankalazana voalohany faha-1 taonan'ny Enseñanzas Medias Cinco Villas 2002
Loka voalohany Fifaninanana tantara fohy Asociación Cultural Fayanás 1
Fifaninanana tantara fohy iraisam-pirenena famaranana II "Ilay mpamaky tsy manam-paharetana" 2004
Fifaninanana X Fifaninanana tantara fohy X "Juan Martín Sauras" 2005
Famaranana amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena Coyllur-Science Fiksi 2005. Però
Fifaninanana I Abaco 2006 an'ny Finalist
Loka faha-1 Fifaninanana tantara mahafinaritra Gazteleku 2006
Loka faha-2 Fifaninanana tantara momba ny harena an-kibon'ny tany any amin'ny Basque Country 2006
Fifaninanana am-boalohany loka faha-XVII "Young Calamonte 1"
Loka faha-4 III Fifaninanana tantara "Villa de Cabra del Santo Cristo 2007"
Fanamarihana manokana tsy manam-paharoa, ao amin'ny sokajy novelomina, tamin'ny 2007 Andrómeda Awards
Fifaninanana faha-5 amin'ny tantara fohy "Villa de Cabra del Santo Cristo 2008"
Fifaninanana famaranana ho an'ny mpilalao finaliste VI Briareo. Cuenca 2008
Fifaninanana famaranana horonantsary famaranana "Villa de Maracena" 2008
Fifaninanana famaranana farany an'ny Gazety XII Gazetyeku de Sestao 2009 (…)
Fifaninanana lisitra fohy an'ny mpisolovava Mey-Jona 2010 Finalist
EFA TOKONY HATRANY NY BOKY REHETRA ETO, amin'ny klika tokana:
HIFANDRAY AMIN'NY LIBRARYO
Manararaotra ny zava-bitako be dia be teo amin'ny tontolon'ny literatiora, fotoana vitsy lasa izay nanatevin-daharana ahy ity tontolon'ny fanoratana atiny ity. Miaraka amin'ny torolàlana fototra indrindra momba ny hevitra haseho, azoko atao ny manoratra ho anao lahatsoratra misy ny toetranao manokana, ny fidirana ho an'ny bilaoginao na ny lahatsoratra hampiakarana toerana ao amin'ny motera fikarohana Internet.
Manana ny hafetseny ny fanoratana atiny. Ny teny dia tokony hanao zavatra betsaka kokoa noho ny miaraka hamoronana fehezanteny. Ny tsirairay dia tsy maintsy manome sosokevitra izy ireo, manolotra, manentana, manintona, na manoratra mozika ary mihira hafatra ho an'ny fahatakaran'ireo izay mamaky azy, toy ny hiran'ny kiririoka tsy hay tohaina na mampihetsi-po.
Amin'ny farany, ny soratra rehetra dia tsy mijanona ho literatiora; miaraka amin'ny fikasana hihantsy fihetseham-po na hampita hevitra; miaraka amin'ny finiavana handresy lahatra na liana hanambara.
Amin'ny alàlan'ny fanoratana dia mianatra manoratra ianao. Taorian'ny dimy ambin'ny folo taona mahery nanerena taratasy sy taratasy maro kokoa, miaraka amina boky roa ambin'ny folo ao aoriako sy asa an-jatony an-tsoratra vita, fantatro fa afaka mamindra hevitra sy hevitra aho amin'ny alalàn'ny literatiora iniana iniana hiditra amin'ny fanoratana atiny tsara rehetra.
Mandrosoa ary lazao amiko izay tianao holazaiko amin'ny tontolonao. Avelao aho hitady ny teny tsara indrindra.